Oxford AstraZeneca oo soo saartay Tallaal waxtar leh Covid19 - Home somali news leader
Home NEWS Oxford AstraZeneca oo soo saartay Tallaal waxtar leh Covid19
Oxford AstraZeneca oo soo saartay Tallaal waxtar leh Covid19
Tallaal coronavirus ah oo ay soo saareen shirkadda dawooyinka ee AstraZeneca iyo Jaamacadda Oxford ayaa muujisay boqolkiiba 70 waxtarka tijaabooyinka lala yeelanayo 23,000 qof, ayay ku sheegeen bayaan ay soo saareen Isniintii.
Ku dhawaaqista ayaa timid ka dib markii daraasado kale oo dawooyin ah oo ay soo saareen Pfizer / BioNTech iyo Moderna ay ku dhawaaqeen waxqabad ka badan boqolkiiba 90.
Natiijooyinka waxay ku kala duwanaayeen 62 iyo 90 boqolkiiba saameyn ku xiran qiyaasta tallaalka, sida ku xusan bayaanka Isniinta.
Maamulaha guud ee AstraZeneca Pascal Soriot ayaa sheegay in talaalka shirkadiisa uu wali waxtar badan yeelan doono isla markaana uu yeelan doono “saameyn deg deg ah”.
Shirkaddu waxay sheegtay inay eegi doonto inay horumariso illaa saddex bilyan oo tallaal ah sannadka 2021 haddii ay ka gudubto caqabadaha haray ee hor tagaan.
In kasta oo dawaddo muujisay boqolkiiba 90 markii la siiyay qiyaas nus ah oo ay ku xigtay qiyaas buuxda oo ugu yaraan hal bil u dhexeysa, natiijadu waxay ahayd 62 boqolkiiba markii la siiyay laba qiyaasood oo buuxa isla muddadaas.
“Falanqaynta isku dhafan… waxay keentay celcelis ahaan saameyn boqolkiiba 70,” ayaa lagu yiri.
Waxay sheegtay in tallaalka la keydin karo, la qaadi karo, waxna laga qaban karo “marka lagu jiro xaaladaha qaboojinta ee caadiga ah” inta u dhexeysa laba iyo siddeed digrii Celsius (36 illaa 46 digrii Fahrenheit) ugu yaraan lix bilood.
“Badbaadso dad badan”
In kabadan 23,000 oo qaangaar ah ayaa hada lagu qiimeynayaa tijaabooyinka, waxaana la filayaa in tirada ay kororto ilaa 60,000, ayaa lagu yiri bayaanka.
Natiijooyinka hore waxay soo jeediyeen inay jiraan 131 kiis oo loo yaqaan ‘Covid-19’ oo ka mid ah kaqeybgadayaasha laakiin ma jiraan wax halis ah.
Tijaabooyinka waxaa sidoo kale laga qaadayaa Mareykanka, Japan, Russia, South Africa, Kenya iyo Latin America, iyadoo tijaabooyin la qorsheeyay sidoo kale laga fuliyay wadamada kale ee Yurub iyo Aasiya.
Andrew Pollard oo ah borofisar wax ka dhiga Oxford ayaa sheegay in natiijooyinkii ugu dambeeyay ay soo jeediyeen in dawaddo ay tahay “tallaal wax ku ool ah oo badbaadin doona dad badan”
“Si xiiso leh, waxaan ogaanay in mid ka mid ah nidaamkeena qiyaasta daawooyinka uu noqon karo mid boqolkiiba 90 waxtar leh oo hadii nidaamkan qiyaasta la adeegsado, dad badan ayaa lagu tallaali karaa iyadoo la siinayo talaal la qorsheeyay,” ayuu yiri Pollard, oo ah madaxa baareyaasha ee Oxford Vaccine Trial. .
“Ku dhawaaqista maanta waa mid suurtagal ah oo keliya iyada oo ay ugu mahadcelinayaan mutadawiciin badan oo tijaabadeenna ah iyo koox cilmi-baaris adag oo tayo leh oo adduunka ah.”
Shirkadda weyn ee cilmiga bayoolajiyadda Mareykanka ee Pfizer iyo bahwadaagta Jarmalka ah ee BioNTech ayaa codsaday oggolaansho si ay u soo saaraan tallaalkooda coronavirus goor hore, tallaabada ugu horreysa ee dhanka gargaarka, maaddaama ay sii kordhayaan infekshannada la laalayo sida waddamada murugaysan iyo dhaqaalaha adduunka horaantii sanadkan.
Hogaamiyaasha G20 ayaa axadii sheegay in aysan “dadaal badan la hari doonin” si loo xaqiijiyo in si cadaalad ah loogu qeybiyo talaalada coronavirus-ka aduunka oo dhan iyo in la taageero wadamada saboolka ah ee dhaqaalahooda ay ragaadiyeen dhibaatada.
Laakiin inkasta oo naadiga waddammada ugu qanisan adduunka ay qaateen qaab midaysan, haddana hoggaamiyaha Jarmalka, Angela Merkel, waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay in heshiisyo tallaal oo waaweyn aan weli lala gaarin dalalka saboolka ah.
Previous articleUS President-elect Biden has nominated longtime adviser Blinken as foreign minister
Next articleGolaha Ammaanka oo ka shiray arrimaha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaare Rooble oo warbixin…